Ambohipo Niharan’ny fitsaram-bahoaka ilay mpamaky trano
Lehilahy iray mpamaky trano no tratran’ny fokonolona namaky tranona mpianatra iray teny Ambohipo ny sabotsy maraina teo tamin’ny 06 ora, fotoana mbola fatorian’ireo olona sasany. Trano izay tsy nisy olona no novakiany tamin’izany.
Raha araka ny fantatra mantsy dia tranona mpianatra lasa namonjy fodiana any Vohemar io nohararaotiny io. Teo am-pamoahana ireo entana rehetra tao an-trano ilay mpanao ratsy no tratra ka avy hatrany dia niharan’ny fitsaram-bahoaka. Vono, daroka, niampy tsindron’antsy no nahazo ity lehilahy nandritra izany ka ny polisy monisipaly tonga teny an-toerana no nitondra azy teny amin’ny hopitaly. Lasa nitsaoka kosa ireo olona namono ity mpangalatra ity raha ny fantatra. Mbola manaraka fitsaboana eny amin’ny hopitaly moa ity farany ary efa tonga mikarakara azy eny amin’ny an-toerana ny fianakaviany. Hisokatra ny fanadihadiana hataon’ny mpitandro ny filaminana aorian’ny fitsaboana hataony.